Somali News 06.23.21 | KWIT
Xeer ilaaliyaha guud ee Iowa Tom Miller ayaa soo saaray warbixin balaaran oo ku saabsan xadgudubka wadaadka ee gobolka. Dib u eegista waxaa kamid ahaa 70 wadaad oo katoolik ah iyo 50 cabasho oo laxiriira xadgudub galmo iyo dhaqan xumo.
Warbixinta ayaa la helay iyada oo kaniisaddu ay lahayd taariikh dheer, xanuun badan oo xadgudub iyo daboolid ah, waxay dejisay dib u habeyn badan intii lagu jiray labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqay in gobolka ay wadar ahaan 30-milyan oo doolar ay ku bixinayso lacagta gargaarka ee dawlada federaalka ah sadex mashruuc oo cusub.
Labaatan milyan oo doolar ayaa ka caawin doonta waaxda waxbarashada ee Iowa iyo jaamacada Iowa inay sameeyaan xarun diirada saareysa wax ka qabashada baahiyaha caafimaadka maskaxda ee caruurta ee iskuulada. Lacag kale waxay aadi doonaan degmada iskuulka ee Council Bluffs iyo Waterloo.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ma soo warineyso inaysan jirin dhimasho cusub oo ka timid COVID-19 oo leh 110 xaaladood oo cusub. Waxaa jira 69 bukaan oo jiifa isbitaalka oo qaba fayraska gobolka kuyaala oo ay kudhowaad 20 kujiraan daryeel adag.
Saraakiisha Xarunta Caafimaadka Mercy iyo UnityPoint Health-St. Luukos wuxuu leeyahay inta badan bukaannada lama tallaalo.
Heerka shaqo la'aanta Nebraska ayaa weli ahaa mid ka mid ah kuwa ugu hooseeya dalka maadaama ay xitaa ka sii dartay bishii May. Shaqo la'aanta gobolka ee 2.6% waxay ku xiran tahay kaalinta labaad ee qaranka. Heerka hadda wuxuu ka yar yahay kala bar heerka May ee la soo dhaafay.
Dhanka kale, heerka shaqo la'aanta ee Iowa ayaa waxoogaa hoos ugu dhacay 3.9% markii 10-aad ee qaranka. Heerka shaqo la'aanta Mareykanka ee bishii Maajo wuxuu ahaa 5.8%.